Malag@sy Miray | Sports	News FeedComments · FAQ	| Blogosphère malag@sy 100% collectif	Accueil
Browse > Home / Archive by category 'Loisirs / Sports'
Resaka « Taxi be » ihany…	26 mai 2011 by Mitiyu 1 Comment Raha tsiahivina vetivety ny niandohan’ny taxi be teto Antananarivo dia ireo minibus nantsoina hoe « Buxi » angamba no azo lazaina fa tena nisantatra izany. Taty aoriana moa dia feno minibus vita avy any Japon no tena nanao ny ankamaroan’ny asa fitaterana ary amin’izao fotoana dia niampy ireo fiara Mercedes avy any Alemana izany. Iaraha-mahalala sy iaraha-miaina isan’andro izany.
Maro amintsika no lasa manao fanatanjahan-tena rehefa handray ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Vao mipoipoitra ery lavira ery ny lohan’ny fiara dia efa miomana sahady mitana tsara ny poketra na kitapo ary miedinedina hanenjika ny fiara. Satria enjehina mantsy izy ireny amin’ny ora firavana sy fandehana miasa sy mianatra. Raha vao mareforefo dia aleo tsy miandry azy mihitsy raha amin’izany ora izany satria ao ny misavika sy mihazakazaka manaraka azy mandroso amin’izay tiany tena hijanonana, ao ihany koa ny misisika mba ho tafiditra alohan’ny hafa ary rehefa tafiditra dia mbola mitsabikimbikina kely mandigana ireo hazo natao fipetrahana manelanelana ny seza. Toy izay ihany koa ny mivoaka.
Tato ho ato dia maro ireo lozam-pifamoivoizana hita sy re amin’ny haino aman-jery fa nitranga tetsy sy teroa. Fiara mifandona, manitsaka olona, manimba tamboho sy rindrin’olona ary ny mifanenjika samy taksi be. Asa na tena ireo mpamily no tsy mitandina na ny fiara no ratsy karakara na ihany koa noho ny habetsahany dia mitombo arakaraka izany ihany koa ireo salan’isan’ny loza.
Ny zavatra tsapa aloha dia maro amin’ireo mpamily no tsy manaja ny lalàm-pifamoivoizana, tsy manaja ny toeram-piantsonana sy ny fandraisana mpandeha, ary ny tena mampalahelo dia tsy ampy fitaizana sy fanabeazana ka lasa manaonao foana ary rehefa saziana dia migrevy satria tsy zatra manara-dalàna. Efa nisinisy ihany izay teti-kasa niaezaka ny nampanjary ny fifamoivoizana miaraka amin’ireto fiara fitateram-bahoaka ireto, na ny avy ao amin’ny polisim-pirenena izany, na ny avy ao amin’ny polisy monisipaly na ireo fikambana maro isan-karazany na ny gazety izay mampiseho ny tsy fanarahan-dalàna.
Nisy ihany koa ny fanajariana na